'संस्थाको अगाडि व्यक्ति केही पनि होइन '
बुधबार, बैशाख २२, २०७३ ०५:०४:५१ | Comments
आङछिरिङ शेर्पा, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)
आङछिरिङ शेर्पा, अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरलाई कार्यथलो बनाएर लामो समयदेखि पत्रकारितामा निरन्तर क्रियाशील छन् । नेपालमा छदाँ कान्तिपुर दैनिकको सिनियर उपसम्पादक पदमा रही पत्रकारितामा सक्रिय थिए । अमेरिकामा आएपछि पनि न्यूयोर्कबाट प्रकाशित एभरेष्ट टाइम्स पाक्षिक पत्रिकाको प्रधानसम्पादक भई पत्रकारितालाई निरन्तरता दिइरहेका छन । सिंगो पत्रकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसेकका शेर्पा नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)का निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन । नेजाको आगामी मे ७ र ८ तारिखमा लसएन्जलसमा हुन लागेको अधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै पत्रकार शेर्पासँग गरिएको कुराकानीको सारांशः
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)को आगामी मे ७ र ८ हुने लागेको अधिवेशनलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ ?
नेजाको यही मे महिनाको ७ र ८ तारिख हुन लागेको अधिवेशन विगतको भन्दा अलि फरक हुनेछ । किनकि यस पटक नेपालको विभिन्न चर्चित सञ्चारमाध्याममा काम गरिसकेका धेरै पत्रकार साथीहरुको बाक्लो उपस्थिति हुने भएको छ भने अधिवेशनको प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति डा. महेन्द्र विष्ट पनि आउने भएको छ । यसको साथै पर्यटकीय नगरी लसएन्जलसमा घुमघामको लागि आनन्दित हुने महसुस गर्दा विगत भन्दा फरक हुने मेरो अनुमान रहेको छ ।
नेजाको सदस्यता वितरणमा गैरपत्रकार हावी भयो भन्ने आरोप आयो नि ?
वास्तबमा नेजाको विधानअनुसार नेपालको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गरि अमेरिका आएर बसोबास गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र नेजाको मुल्य, मान्यतामा प्रतिबद्धहरुको साथै पत्रकारिता विषयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले नेजाको सदस्य पाउने प्रावधान छ । यदि यस अनुसार कसैले सदस्यता लिएको हो भने यसलाई गैरपत्रकारको हावी भयो भन्नु मिल्दैन ।
नेजाको पूर्व अध्यक्ष हैसियतले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाललाई कसरी मुल्याङकन गर्नुहुन्छ ?
वर्तमान कार्यसमितिका साथीहरुले संस्थालाई माथि उठाउनका लागि धेरै प्रयत्न गरेको छ । तर गत अधिवेशन लगत्तै नेतृत्व विवादमा परेपछि सोचेकोजस्तो अन्य कार्यहरु गर्न नसकेको हो की जस्तो लाग्छ । हुन त अमेरिकामा कति धेरै संस्थाहरु छन् जुन नाम मात्रको छन् । तिनीहरुले खासै केही काम गर्न सकेको छैन । तर त्यस्ता संस्थाहरुको तुलनामा नेजाको यो कार्यसमितिले दुइ वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने संस्थाको कामहरु गरेको जस्तो लाग्छ ।
अमेरिकामा रहेका पत्रकारहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरु कस्ता छन ?
अमेरिकामा आएका पत्रकारहरु कसले कस्तो समास्या भोग्नु परेको छ भन्ने कुरा नेजालाई अहिलेसम्म खासै जानकारी आएको छैन ।
नेजालाई एक पक्षले बहिष्कार गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भयो नि ?
नेजा उत्तर अमेरिकामा रहेको पत्रकारहरुको एक मात्र साझा संस्था हो । यो संस्था स्थापना भएको ९ वर्ष हुन लागेको छ । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म धेरै अनुभवी पत्रकारहरुको संलग्नता रहेको छ । त्यसमा पनि यो पटक झन धेरै अनुभवी पत्रकारहरु संस्थामा आएका छन् । एक पक्षले बहिष्कार गरेको भन्नु भन्दा पनि केही पत्रकार साथीहरु गत अधिवेशन लगत्तै नेजा नेतृत्वको कार्य सन्तोष नलागेर फेसबुकबाट राजीनामा दिएको चाहि हो । वास्तवमा राजीनामा दिने मित्रहरुले नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति चित्त बुझेन भने संस्थाभित्रै बसेर विरोध गर्नु सक्नु पथ्र्यो तर कसैको नाम गरेर संस्थाबाट राजीनामा दिएर अलगै बस्नु कसैको लागि फाइदा छैन । हामी जहाँसुकै पुगेपनि संस्थाको अगाडि व्यक्ति केही पनि होइन । व्यक्ति मिलेर बनेको संस्थामा कसैले संस्था छोडेमा अरु कोही आउँछ संस्था त सधै आफनै प्रक्रियामा अघि बढिरहन्छ ।
नेजाको गतिविधिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
नेजाको पहिलो गतिविधि भनेको शुरुवातको दिनदेखि नै अमेरिकाभरिका हामी नेपाली पत्रकारहरु वर्षमा एकदिन एक ठाउँमा भेला भई सुख दुःखको कुरा गरि एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै नेपालमा दुख पाएको नेपाली पत्रकारहरुको लागि सहयोग गर्दै आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन अनुभवी पत्रकारहरुको सोच, विचार अनुरुप समय सापेक्षित रुपमा सवैको सरसल्लाहमा थप नयाँ योजनाहरु ल्याउनुपर्छ ।
अब नेतृत्वले कस्ता कार्यक्रमहरु लैजानुपर्ने देखिन्छ ?
समाजिक सेवाको भावनासँगै अबको नेतृत्वले अमेरिकास्थित पत्रकारहरुको संगठनसँग हातेमालो गरि नेपालको पत्रकारहरुको लागि फेलोसिपहरु खोजेर पठाउने र नेपालको पत्रकारहरुको सीप विकासको लागि तालिम दिनका लागि सघाउ पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै अहिले दिदै आएको नेजा पत्रकारिता पुरस्कारको राशी अलि बढाएर २ लाख भन्दा बढीको पुरस्कार दिनुपर्छ । त्यस्तै नेजाभित्र रहेका दक्ष पत्रकारहरुको सहयोगमा आफनै प्रकाशनमा पत्रपत्रिका र टिभी कार्यक्रमहरु पनि चलाउन सकिन्छ ।
नेजाको निर्वतमान अध्यक्षको हैसियतले नेजाको बारेमा केही कुरा राख्ने मौका दिनु भएकोमा नेपाली बुलेटिन टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामी अहिले प्रवासमा छौ । प्रवासमा नेपाल र नेपाली भावनालाई कदर गदै सवै एक भएर मातृभूमिको सहयोगमा जुटनु पर्दछ । त्यसमा पनि हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका पत्रकारहरु एक भएर प्रवासी नेपाली समुदायसँग हातेमालो गरि निःस्वार्थ भावनाले सवैलाई सहयोग गर्न तिर लागौ । सकेसम्म म भन्ने घमण्ड त्यागेर हामी भन्ने तिर लागौ । अन्तमा प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यो अवसरमा सवैलाई हार्दिक शुभकामना दिदँै नेजाको अधिवेशनले सक्षम नयाँ नेतृत्व चयन गरोस भन्दै सवैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
प्रस्तुतिः मानछिरिङ तामाङ
धादिङको लापा गाउँलाई स्थानान्तरण गर्ने अगुवा समाजसेवी दिनेश तामाङ शान्ति तामाङ, ‘पहिरोबाट आज पनि मान...